Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl – Danloduo ya. A gaghị ana gị ego ọ bụla
Nọrọ ebe a gụọ Baịbụl ma ọ bụkwanụ gị adanloduo nke a na-egere egere. Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ bụ Baịbụl dị mfe ọgụgụ, ihe a sụgharịrị na ya bụkwa eziokwu. E nwere nke nwere Akwụkwọ Nsọ Hibru na Grik, nweekwa nke nwere naanị Akwụkwọ Nsọ Grik. E bipụtala ya n’ihe karịrị asụsụ otu narị na iri abụọ. E kesaakwala ihe karịrị narị nde abụọ.